Har’a sa’aati booda magaala Sioux City keessati hiriiri nagahaa geggeefamera | KWIT
Kan uumame ganama sa’atti 8 a.m kara 24th fi karaa Clerk Streets bilookki muraasa Floyd Bouleverd raa.
Nama wahii kankolaata oofuu jiraniti qawee dhukaasuudhan, san booda makiina utubaa dhoyte, poolisooni naannawa jiran namichi tuksii bane san reebuti turani.
Namichi makina oofu qawween hin dhahamne, garuu sababa saan miidhama xiqqoo irra gaheera.
Namichi makina oofaa ture qorannoo isaa pooliisi waliin godhaa hin jiru.
Poolisni eenuma shakama nii beeka fi ammati isa soqu jirani.
Directorini mana fayyaa Sioux land akka jedheti covid-19 magaala Woodbury county keessatti xiqqaacha jira.
Haata’u garuu, state keessatti dalagaadhan hin banamuu hanga torbaan dhufutiti sababni dhukubni kuni xiqaatta jiratuus mallatoon isaa mul’isuuf yeroo muraasa fudhata.
Hospitaaloni Sioux city lamaan hospitaala isaani keessati dhukubsatooni akka hir’aataa dhufan himan. Haa ta’u garuu ummanni ammas haguugi fuula akka uffataan fi dhukubni akka hin bal’anee eeganno gochuu qaban.
Akkasumas, magaala Woodbury county namni haarawa qabame covid-19 27 yoo ta’u name guutun qabame 2,800 irra darbee jira.
Dakota county nama qabame baaye arganiru, ammaf nama 1,700 ol tahee jira. Magaala Sioux city naannawa metro tti du’e 64 gahee jira.
Biship R. Walter Nickless